Dowlada Ciraaq oo doonaysa in ay iskuulo ka furato Sweden | Somaliska
Dowlada Ciraaq ayaa doonaysa in ay Sweden ka furato iskuulo ku baxaya luuqada carabiga oo ay wax ka bartaan Ciraaqiyiinta ku nool dalkaan.
Safiirka Ciraaq u fadhiya Sweden ayaa warqad codsi ah oo uu u diray wasaarada Waxbarashada waxa uu ku sheegay in iskuuladaan ay noqon doonaan iskuulo u dhigma kuwa caalamiga ah oo manhajkoodu uu noqon doono midka Ciraaq. Sababta ayuu sheegay in ay tahay in dowlada Ciraaq ay filayso in dad badan ay dalkii dib ugu laabtaan, oo ay doonayaan dadka soo laabanaya in ay yihiin kuwo waxbarashada wadanka la qabsan kara isla markaana luuqada Carabiga si wanaagsan ugu hadli kara.
Safiirka ayaa sheegay in qaasatan arintaan loogu tala galay dhalinyarada oo uu sheegay in ay ku liitaan luuqada, oo xitaa caruurtiisa aysan Carabi fiican ku hadli karin. Mar wax laga waydiiyay haddii arintaan ay dhibaato ku noqon karto barnaamijka isdhexgalka Sweden ayuu sheegay in aysan jirin midaasi oo ardadu ay dooran karaan iskuulka ay doonayaan.
Codsiga safaarada ayaa lagu sheegay in Ciraaqiyiin badan ay doonayaan in dalkoodii ay ku noqdaan qaasatan dadka wadankaan aan la qabsan oo aan shaqada ka helin. Codsiga iskuulka ayaa hada waxa uu go’aan ka sugayaa wasaarada waxbarashada iyadoo ka dibna loo gudbin doono Waaxda Baaritaanada iskuulada (Skolinspektionen).
Dowlada Ciraaq ayaa sidoo kale qorsheynaysa in iskuulo nuucaan ah ay ka furato wadamada kale ee Yurub. In la aqbalo codsagaan ayaan noqon doonin mid fudud maadaama dadka Ciraaqiyiinta ah ee wadankaan ku nool inta badan la siiyay deganaansho rasmi ah. Ciraaqiyiinta ku nool Sweden ayaa lagu qiyaasaa 250,000
SOOMAALI WEYN AYAA SAAN KU RAJEYNAA IN EEY NOQOTO MID KU DUUBAN ADUUNKA MEESHA EEY KA JOOGAAN INSHA ALAAH
masha allah markas ciraqiin kaliya ma dhiganayaan skulkan ee muslimin badan baa ka faiidaysa aniga rayigayga wayo anigaba igu horeyan lahaa qofk iskulkan gala allow aqbal o ajiib
Waa wax lagu FARXO , ilmahaaba LUUQADA carabiga noo baran lahaa si ay DIINTA ugu FAHMAAN iyo Quraanka .
Ayado o afsomali schooladka lagudhigana wan sugi insha’allah
To Jimcaale says:
ASC dhamaan Muslimiinta qaasatan walaalka website kaan qaaliga ah furey, Jimacale waxaan rabaa inaan ogaado sida qof Somali ah ku noqon karo medborgare/citizen waxaan wada ognahey in 8 sano uu qofkaa sugo isaga oon wadankan dabi ka gelin, laakiin waxaan is weydiin mudan goormaa qofka looga tiriyaa 8 sano ma sida wadamada qoxootiga qaabila oo kale oo ah maalinta uu wadanka soo galey? su’sheyda labaad waxey tahey hadii qofka halmar loo diidey sharciga miyuu la mid yahey qofka loo tirinaayo maalinta uu wadan ka yimid? wabilaahi Towfiiq.
asc dhaman asxta qofkan magaciisa qariyow anigaa kaaga jawabaya suaashaada weyna fududahey waayo waxa lagaaga bilaabayaa maalintii sharciga laguu ogolaaday laguuma xisaabinaayo inta diidmo aad heshay ama inta sano ee sharci daro wadanka ku joogtay wabilaahi towfiiq